Jawaari oo dadka xusuusiyay qodob ka maqan heshiiska Doorashada, kaas oo dhalin kara khilaaf halis ah – Kalfadhi
October 1, 2020 October 1, 2020 Hassan Istiila
Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa 26-ka bishan September, ansixiyey heshiiskii doorashada ee ay wada gaareen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, maammul gobolleeyada iyo gobolka Banaadir.
Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, ayaa xildhibaannada Labada Aqal, madaxda maamul Gobolleedyada iyo kuwa federaalka xusuusiyay qodob muhiim ah oo ka maqan heshiiska doorasho, kaas oo uu sheegay haddii aan lagu darin heshiiska in khilaaf xooggan uu dhalin karo.
“Odayaasha in ay soo iloobeen iyo in kale ma oggi, doorasho kasta waxaa ka dhasha muran, gudi ayaa loo baahanyahay mar walba oo kala saara. Waxaa gudigaasi la yiraahdaa guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka, guddigaasi hadda kuma jiro heshiiska ay gaareen madaxweynayaasha”, ayuu yiri.
Mudane Jawaari ayaa sheegay in uu ku talinayo in madaxweynayaasha la xusuusiyay muhiimadda guddigaasi. Muhiimadda ayuu ku sheegay in xeernidaamiyaasha ay sameynayaan ay ku daraan go’aanka ugu dambeeya cida iska leh, ma waxaa iska leh guddiga xalinta khilaafaadka, maxkamada sare miyaa loo baahanyahay mise golaha Qaranka.
Markii lasoo dhisayay Baarlamaankii 10-aad, waxaa dhacday in xildhibaanno markii la dhaariyay kaddib loo sheegay in doorashadooda dib loogu noqonayo.
Si arrimaha noocaasi ah aysan mar dambe u dhicin, Mudane Jawaari, ayaa soo jeediyay in meel kama dambeys ah la tilmaamo, ha ahaato maxkamada Dastuuriga, guddiga federaalka ama meel kale.
Wuxuu tala ahaan ugu soo jeediyay Guddoonka Golaha Shacabka in warqada ay u gudbinayaan madaxweynaha lagu darro talada noocaasi ah, iyada oo waaya-aragnimo laga heysto doorashadii hore.